Degmada Dayniile oo Burcad dharka Ciidanka ku libisan oo Habeenkii dadka ku dhacdo | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Wararka Degmada Dayniile oo Burcad dharka Ciidanka ku libisan oo Habeenkii dadka ku...
Degmada Dayniile oo Burcad dharka Ciidanka ku libisan oo Habeenkii dadka ku dhacdo
Burcad hubeesan oo mararka qaar xiran dareeska ciidanka milatariga Soomaaliya ayaa dhibaato xoogan ku haya shacabka ku dhaqan xaafado katirsan degmada Dayniile ee gobolka Banaadir.
Kooxahan burcada ah oo ku hubeesan biskoolado iyo qoryo ayaa xiliyada qaar isticmaala mooto Bajaaj halka mararka qaarna xaafadaha ku lugeeya, waxa ayna burcadan dhac u geestaan dadka shacabka ah ee arkaan iyaga oo ka qaata moobeelada.
Xaafadaha ugu daran ee burcadan dadka ku dhacaan habeenadii lasoo dhaafay ayaa lagu sheegay Xaafada Raadeelka iyo xaafado kale oo ku dhaw dhaw, waxa ayna burcada dad badan kaga qaateen moobeelo halka dadka qaarna ka dirsadaan lacagta mobelka ugu jirta.
”Markii hore amni la isku haleyn karo ayaan heesanay, moobeelada wadooyinka ayaan isaga isticmaali jirnay, hada xaalku waa isbaday cid moobeel soo qaadan karta malahan cabsi darteed, mobeel dhacow kaliya xitaa mahan lacagta ayaa marka hore lagaa dirsanaa kadibna mobelka lagaa sii qaadanaa” ayuu yiri mid kamid dhalinyarada Dayniile.
Qaar kamid ah Dhalinyarada Dayniile ayaa la sheegay in habeen hore ku guuleesteen in ay eryadaan gacanta kusoo dhigaan mid kamid ah buracada dhaca u geesta, waxaana ninkan oo sheegay in askari yahay ku xiran yahay saldhiga booliiska Dayniile.
Degmada Dayniile ayaa kamid aheyd degmooyinka ugu amaanka badan magaalada Muqdisgo, waxaana degmadan horey aan looga aqoon burcada dadka dhaca iyo dhibaatooyinka kale u geesta.